Gaas:-“Waxaa La Gaaray Xiligii Axmed Madoobe iyo Kenya Dalka laga Saari lahaa”,+Dhageyso – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Mid kamid ah Siyaasiyiinta reer Jubbaland ee sida weyn ugu soo horjeedda Siyaasadda Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa soo dhaweeyay go’aanka Dowladda Soomaaliya dalka ugu ceyrisay Safiirkii Kenya.
C/rashiid Macalin Gaas oo la hadlay idaacadda Simba ee Magaaladda muqdisho ayaa sheegay in go’aanka Dowladda Soomaaliya kasoo baxay uu yahay mid lasoo dhaweeyo.
Waxa uu sheegay in Axmed Madoobe uu Kenya saaxiib dhow la yahay,islmarkaana la joogo xiligii Umadda Soomaaliyeed laga hor wareejin lahaa Axmed Madoobe iyo Kenya.
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay xalay in Soomaaliya ay dib ugu yeeratay safiirkeeda Kenya danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, waxaana ay safiirka Kenya danjire Lucas Tumbo ku wargalisay in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto.
Dawladda Federaalka ayaa go’aankan qaadatay iyadoo ilaalinaysa madax banaanideeda Qaran,sida lagu yiri qoraalka ka dib markii ay u muuqatay in Kenya si bareer ah ay u fara galinayso umuuraha gudaha Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland.
Dhanka kale Dowladda Kenya ayaa ka hadashay go’aankii Xalay Dowladda Soomaaliya dalkeeda kaga ceyrisay safiirkii Kenya Safiirkii Kenya u fadhiyay Muqdisho Lucas Tumbo, isla markaana u yeeratay Safiirkeeda joogay dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya Macharia Kamau oo qoraal soo dhigay bartiisa bulshadda ayaa sheegay in go’aanka kasoo baxay Soomaaliya ay ka xumaadeen.
Waxa uu sheegay in labadda dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay kawada hadli doonaan go’aanka lagu ceyriyay Safiirkii Kenya u fadhiyay Muqdisho Lucas Tumbo, tarsana loogu yeeray.